१७.५५ अङ्कले नेप्से घट्दा कारोबार रकममा ६३.२४ प्रतिशतले कमी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १७.५५ अङ्कले नेप्से घट्दा कारोबार रकममा ६३.२४ प्रतिशतले कमी
१७.५५ अङ्कले नेप्से घट्दा कारोबार रकममा ६३.२४ प्रतिशतले कमी
चैत २७, काठमाडौं (अस) । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक १ दशलमव ३६ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । यसदिन शुरुदेखि नै उतारचढावमा देखिएको बजार अन्त्यमा घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको आधा घण्टामा १ हजार २ सय ६७ विन्दुमा पुगेको बजार १ घण्टा १५ मिनेटमा १ हजार ९१ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुपछि बजार ओरालो लागेर अन्त्यमा १७ दशमलव ५५ अङ्क घटेर १ हजार २ सय ७० दशलमव २३ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ६३ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र बीमा समूहको २ दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीको ५ हजार ४ सय ४१ पटकको व्यापारमा ९ लाख ८३ हजार १ सय ५९ कित्ता शेयरको रू. ३४ करोड ९० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ४ सय ६१ मा रू. १ करोड ३७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ८ प्रतिशतले बढेको छ भने हाम्रो विकास बैङ्कको शेयर मूल्य ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीमा ३० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छभने १ सय २४ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।